Qaanuunka abaal marinta | Doodwadaag waa Danwadaag.
Qof kasta oo muslim ah wuxuu rumaysan yahay, ama caqiido u ah, inay jirto abaal marin Alle uu addoomankiisa abaal mariyo. Dadka qaar waxay u haystaan in abaal marintu ay tahay aakhiro kaliya, ee aysan jirin abaal marin inta la nool yahay. Hase yeeshee dad badan oo Diinta wax uun aqoon ah u leh, ayaa rumaysan in abaal marintu caam tahay, oo adduun iyo aakhiraba la isku abaal mariyo. Waxaa kale oo kalsoonida qaanuunkaas xoojinaya caddaaladda Alle oo qof kasta rumaysan yahay inaan la dulminayn. Arrintaasi waa mas’alo macruuf ah oo la wada ogyahay. Waxaanse rabaa inaan xoogaa sharaxaad iyo faham guud ah aan ka bixiyo, si fahamka mas’aladaas uu aad ugu caddaado.
1. Marka ugu horaysa waa inaan fahamno maxaa la iska abaal marinayaa? Waxa camalka la yiraahdo waa maxay? Taas aan kuu sharaxo xoogaa. Camalka lugaha, gacmaha, indhaha, xubnaha taranka laga sameeyo waxaa ka horeeya oo sidoodaba keena camal xagga niyada iyo qalbiga ah. Haddii aadan qalbiga ka niyaysan inaad camal Jinsi ah, ama Jimaac samayso, xubintii aad isticmaali lahayd ma shaqaynayso. Haddii aadan go’aansan oo aadan qalbiga ku qaban inaad qof disho, lugta iyo gacantu midna ma shaqaynayso. Xubnuhu waa askar. Maskaxduna waa ammiir ama sayid amarka bixiya. Sidaas daraadeed ayaa Nabigu inoo caddeeyay oo uu yiri: “انّما الاعمال بالنيات, وانّما لكلّ أمرىء ما نوى” marka waxaad ogaatay, oo aad si cad u fahamtay in shayga muhiimka ah ay tahay niyadaada. Waxa lagaa abaal marinayana ay tahay sida aad u fikirto iyo waxa aad niyada ku hayso, ka hor waxa aad samayso ama aad qabato. Camalkaaga waxaa ugu muhiimsan niyadaada. Camalka xubnuhu wuxuu ka dhashaa waxa aad maskaxda ku hayso ama aad qalbiga ku hayso.
2. Abaal marinta ama Jazaynta, waxay ku timaadaa qaab ka dhalato ah, oo otomaatik ah (automatic). Tusaale ahaan, xasadnimada, nacaybka, colaada, ciriiriga, baqdinta, faqriga iyo dagaalada ka dhasha waxay si dag-dag ah u soo jiidanaysaa, wixii lamidka ahaa, oo lagu abaal marinayay. “الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النّار الحطب” Xasanaadka waxaa ka mid ah, beertaadii, gurigaagi, gaarigaagii, dukaankaagii, caruurtaadii, dalkaagii, dawladdadii iyo wixii la mid ah. Meeye?
Waxaa cunay xasadka. Colaadii iyo xiqdigii iyo dagaaladii ka dhashay waa in la inaga abaal mariyaa. Si la inooga abaal mariyo waa inaan helnaa wax iyagii u eg oo noocoodii oo kale ah. Haddii aad fiiriso sidii aan u fikiraynay, laga bilaabo wakhtigii dagaaladii ahliga ahaa ay bilaameen ilaa iyo hadda, waxay u eg yihiin sida dhulkii u ekaaday. Tusaale ahaan, Shalanbood, Afgooye, Jannaale, Marka caday, Baydhabo, Kismayo, Jawhar, Balad wayne, iyo dhammaan magaalooyinkii sida fiican u dhisnaa waxaad arkaysaa inay u egyihiin wixii maskaxdeena ku jiray. Marka dhulku wuxuu ka markhaati furaa sida maskaxda dadku tahay. Haddii aad dhulkeena Soomaaliyeed ku soo wareegto oo aad meel kasta ka fiiriso waad naxaysaa. Sida guryuhu uddumeen, fool xumada, jidlaanta, ciriiriga, qurux la’aanta, Cusbitaalkii qaranke ee Digfeer la oranjiray sida uu u egyahay, hotelkii five starka ahaa ee Jubba iyo Curuba sida ay u egyihiin, waa sida maskaxdeenu u egtahay. Macnaha abaal marintuna waa saas. Waa qaanuun Rabbaani ah oo isa soo jiidanaya, ama iska ratibmaya.
3. Fikraddaasi aan kor ku xusay waxaa ka markhaati ah, addilada Diinta oo Quraan iyo xaddiithba ah. “وأن ليس للانسان الّا ما سعى وأنّ سعيه سوف يرى” وفى الحديث “أنما الاعمال بالنيات وأنّما لكلّ أمرئ ما نوى” “أنا عند ظنّ عبدى, فليظنّ عبدى ماشاء” “أدعو الله وأنتم موقنون بالاجابة” كما تدين تدان.
Addiladaas xagga Diinta ah, iyo tusaalaha cad ee nolosheena Soomaaliyeed ku saabsan waxay ka markhaati furayaan, xiriirka ka dhexeeya sida aan u fikirno iyo sida nolosheenu noqonayso. Noloshaada shakhsiga ah, naftaada, reerkaaga, waddan kaaga, dhaqaalahaaga, xiriirkaaga dadka kale, intaba waxaa soo jiidanaya qaanuunka rabaaniga ah, ee abaal marinta aan u naqaan. (Attraction law) Sida qaanuunka Cufjiidadka ama graphite law ayaa dhammaan qawaaniintu u shaqaysaa. Waxaad helaysaa wixii aad soo jiidato. Waxaad soo jeedanaysaa wixii aad ku fikirto. Waxaa muhiim ah inaad ilaaliso maskaxdaada iyo qalbigaaga, oo aad Alle wax fiican ka filato wax wayn oo fiicana aad ku fikirto. Haddii had iyo jeer aad ka wal-washo faqriga oo aad ka baqdo faqri iyo wax la’aan waxaad soo jiidanaysaa faqri iyo wax la’aan. Sidee u soo jiidanaysaa? Waxaad u soo jiidanaysaa waad ka fikirtay. Waad ka wal-washay. Qalbigaaga ayaad galisay. Markaas waxaad ka fikiraysay ama aad ka baqaysay ayaad soo jiidanaysaa. Waxay la midtahay, xeerka dhulka oo kale. Haddii aad beertaada gallay ku abuurto, qare kama soo baxayo, ee gallay ayaa ka soo baxaysa. Haddii aad maskaxdaada galiso, xumaan, baqdin, faqri, wal-wal, xasadnimo, intaas ayaad noloshaada ka helaysaa. Sidaas u ogow.
Waxaan filayaa in xoogaangaan aan meeshaan ku qoray ay aad muhiim u yihiin. Waa sida aan isleeyahay. Waxaan filayaa inay adagtahay in la helo warkaan oo af-soomali ku qoran oo dadbadan oo Soomaali ah ay fahmi karaan. Waxaan Alle ka rajaynayaa inuu kuu noqdo sida aan filayo, oo aad macluumaad kaa maqnaa iyo baraarug xaga nafsadda ah, aad ka hesho. Aamiin.
Sheekh Cabduraxmaan Jabriil